Imfundiso yeNdalo yemvelo kunye neTheology yeNdalo
Ininzi yezobufundisi yenziwa ngombono wakholwayo ozinikeleyo, onokholo kwiibhalo eziphambili, abaprofeti, kunye neembonakaliso zesithethe esithile. ITheology iyazama nokuba yintsebenziswano yefilosofi okanye yenzululwazi. Indlela abafundisi bezobugcisa abaphatha ngayo ukudibanisa ukuthambekela kokubambisana kubangela iindlela ezahlukahlukeneyo ze-teolojia.
Yiyiphi iMfundiso yeNdalo?
Indlela eqhelekileyo kwi-theology iyaziwa ngokuthi "inkolo yemvelo." Nangona indlela yokuziphatha engapheliyo yamkela inyaniso yokuba khona kukaThixo kunye neenkalo ezisisiseko ezinikezelwa yithethe, inkolo yemvelo ithatha ukuba umntu unokuqala ukusuka kwindawo engekhoyo yonqulo inkolelo kwaye ixela inyaniso yebancinci (esele yamkelwe) iziphakamiso zonqulo.
Ngaloo ndlela, inkolo yemvelo ibandakanya ukuqala kwizinto eziyindalo okanye ukufunyanwa kwezenzululwazi nokuzisebenzisa, kunye neengcamango zefilosofi, ukubonisa ukuba uThixo ukhona, into enjani uThixo, njalonjalo. Isizathu sabantu kunye nesayensi ziphathwa njengeziseko ze -ism, kungekhona isityhilelo okanye isibhalo. Ukubaluleka okubalulekileyo kwalomsebenzi kukuba izazinkolo ziyakubonisa ukuba iinkolelo zonqulo ziqiqa ngokusetyenziswa kwezinye iinkolelo kunye neengxabano ezamkelekile njengeziqulunqo ngokwazo.
Xa umntu esamkela iingxoxo ze-teoloji yemvelo (kunye neendlela eziqhelekileyo zokuyila, i-teleological, ne- cosmological arguments ), ngoko ke kufuneka kucatshulwa ukuba isithethe esithile esona siphumelele siphumelele kwisigqibo esele sifikelele. Noko ke, kukho ukusola ukuba kunjalo nangona abo bahlala kwi-teoloji yemvelo bathi baqala ngohlobo kwaye baqikelele kunqulo, baxhomekeke kwiindawo ezingokwenkolo zendabuko kunokuba zivumeleke.
Ukusetyenziswa kwemfundiso yezinto zemvelo kwimeko eyadlulayo kwanikezela ekuthandweni kobukhohlakali, isikhundla sobukhosi esekelwe kwintando yesimo esingokwemvelo kwizityhilelo ezingcwele kunye nolawulo oluthixo "owalindileyo" odale indalo kodwa engabandakanyekanga kuyo. kwakhona. I-teology yezemvelo iye yezinye iindawo ezigxile kakhulu kwi-"oodicy, "ukufundwa kwezizathu zokuba kutheni ububi nokuhlupheka kuhambelana nokukholwa koothixo olungileyo nothando.
Yintoni iTheology yeNdalo?
Ukuya kwelinye icala "i-theology yemvelo." Esi sikolo sengcamango siyamkela indlela yenkolo yemveli yokucinga inyaniso yezibhalo zonqulo, abaprofeti kunye nezithethe. Emva koko iya kuqesha iinyani zendalo kunye nokufumanisa izenzululwazi njengesizathu sokubuyisela kwakhona okanye ukuguqulwa kwezithuba zemveli zesayensi.
Ngokomzekelo, kumaKristu adlulileyo abonakalisa indalo, njengalwe nguThixo, ngokuqonda kwabo kwendalo: obungunaphakade, engaguqukanga, epheleleyo. Namhlanje isayensi iyakwazi ukubonisa ukuba uluntu luhlala luphelile kwaye luhlala luguqukayo; Oku kuye kwabangela ukuguqulwa nokuguqulwa kweendlela abafundisi bezekolo abangamaKristu bachaza ngayo nokuqonda indalo njengendalo kaThixo. Isiqalo sabo sokuqala, njengangaphambili, inyaniso yeBhayibhile kunye nesityhilelo samaKristu; kodwa ukuba loo nyaniso ichazwa njani utshintsho ngokwenza kwethu ukuqonda imvelo.
Kungakhathaliseki ukuba sithetha ngemfundiso yezemvelo okanye imfundiso yendalo, umbuzo omnye uyaqhubeka ukuza: ngaba sinika ubungakanani besityhilelo kunye nesibhalo okanye kwendalo kunye nesayensi xa sizama ukuqonda indalo ejikeleze ngathi? Ezi zikolo zibini zicinga ukuba zihluke ngokusekelwe kwindlela umbuzo uphendulwa ngayo, kodwa njengoko kuphawuliwe ngasentla kukho izizathu zokucinga ukuba ezimbini azikude zihluke kakhulu emva koko konke.
Ukungafani phakathi kweNdalo kunye neNkcubeko yeNkolo
Kungenzeka ukuba ukungafani kwabo kubaluleke kakhulu kwisigxina esisetyenzisiweyo kunokuba imigaqo okanye indawo eyamkelwe ngabafundi bezkolo. Sifanele sikhumbule, emva koko, ukuba isazi senkolo sisichazwa ngokuzibophezela kwisithethe esithile senkolo. Izazi-mfundiso zezeMfundiso zeNkolo zithethwa yizinzululwazi okanye ngabafilosofi abangathandekiyo. Umsebenzi womfundisi wezezinkolo ukuchaza, ukucwangcisa, nokukhusela imfundiso yenkolo yabo.
Kodwa zombini inkolo yemvelo kunye ne-theology yemvelo inokungafani, nangona kunjalo, ngento ebizwa ngokuthi "inkolo engokwemvelo." Ininzi ebonakalayo kwezinye iindidi zamaKristu, le ndawo yezobuloli inqaba ukufaneleka kwembali, uhlobo, okanye nayiphi na into "yemvelo" ngokupheleleyo. UbuKristu akuyiyo imveliso yamandla, kwaye ukholo kwimiyalezo yobuKristu alunanto kwihlabathi lemvelo.
Kunoko, umKristu kufuneka abe nokholo kwinyaniso yemimangaliso eyenziwa ekuqaleni kwecawa yamaKristu.
Le miqondiso imele ukusebenza kukaThixo kwindawo yomntu kwaye iqinisekise ukuba yinyaniso epheleleyo, yobuKristu. Zonke ezinye iinkonzo zenziwe ngabantu kodwa ubuKristu bumiselwe nguThixo. Zonke ezinye iinkolo zijolise kwimisebenzi yemvelo kwimbali, kodwa ubuKrestu bujolise kwimisebenzi engaphezu kwendalo, imimangaliso kaThixo ekhoyo ngaphandle kwembali. UbuKristu - ubuKristu bokwenyaniso - bungahlambulukanga ngumntu, isono, okanye uhlobo.
Uphuhliso lwePapal Primacy
I-Catholic Liberation Teology kwiLatin-America
Iiprogram zoLungileyo zamaKristu
Ukufana Phakathi Kwenkolo Nefilosofi
Inkcazo: Igunya leNkolo Vs. IGunya leZizwe
Isono Sokuqala eBhayibhileni
Yayiyiphi i-Ukiyo yaseJapan?
Iimpawu ze-Nephili kunye neziGulane eziMnyama zaseGrisi
Eyona mivuzo yoMgqibelo
Yiyiphi iKholeji yoBugcisa boBugcisa?
Oko Okufuneka Ukwazi Ngezifakwe kwi-Guitar
Ukusebenzisa isenzi sesiTransti sikaTratar '
I-Funniest Donald Trump Yokumiswa kweMemes
Iingoma ezingama-40 eziphezulu zamaKristu zika-2010
11 Abafundi abaMnyama kunye nobuGcisa obani abachaphazela i-Socialology
Iingoma ezilishumi eziphezulu zeeTheatre eziKhulayo
Hillary Clinton Uxabiseke Kangakanani?
I-Lobster & Steak Food Stamp Receipt
I-Beehive: iMicrosoft Magic
Iimpapasho eziMnandi zeHotbit for Young People
Xa uMongameli weeMatriki aphumelela?
UkuPhathwa kweMali yeThuthi
Umgaqo-siseko wase-US - Isiqendu 1, icandelo 10
I-Brosimum Alicastrum, Umthi wasendulo wamaMaya weBreadnut
Usetyenziso lweeNkundla zokuSebenzisa
Izithuthi Unako kwaye Unako Ukukwazi Ukuzijonga Ngamavili Angu-4
Indlela yokukhetha umthi weKhisimesi e-Eco-Friendly